FAMETRAHANA TAHIRIM-BOLAMENA HO AN’I MADAGASIKARA – Ministère des Mines et des Ressources Stratégiques
FAMETRAHANA TAHIRIM-BOLAMENA HO AN’I MADAGASIKARA
Manitikitika ny sain’ny maro ihany koa ny seha-pihariana volamena. Nandritra ny tafa izay nifanaovany tamin’ny mpanao gazety dia nitondran’ny Minisitra Fidiniavo RAVOKATRA fanazavana ny fanapahan-kevitra nandritra ny Filan-kevitry ny Minisitra ny Alarobia 15 Janoary 2020, dia ny hirosoan’ny Fanjakana amin’ ny fametrahana ny tahirim-bolamena nasionaly . Malalaka ny rehetra hiantsehatra amin’ny resaka volamena, hoy ny Minisitra saingy atao ao anatin’ny mangarahara sy ny fanarahan-dalàna izany. Nampahafantariny fa hisy ny fanaovan-tsoniam-piarahamiasa eo amin’ny Ministeran’ny Harena ankibon’ny tany sy ny loharanonkarena stratejika sy ny Banky Foiben’i Madagasikara. Ity farany izay hisolo tena ny Fanjakana amin’ny fividianana sy fitehirizana volamena. Ny tanjona amin’izany dia hampatanjaka ny sandam-bola sy hahamarin-toerana ny Ariary. Hatao ihany koa izany hahitana soritra ny volamena miala sy mivoaka eto Madagasikara. Tsikaritra, hoy ny Minisitra, fa saika ireo firenena manana tahirim-bolamena dia matanjaka ara-toekarena avokoa, toa an’i Rosia, Amerika, Sina. Noraisiny ho ohatra koa ny Nosy Maorisy izay tsy manana volamena ao ambanin’ny taniny nefa manana tahirim-bolamena. Tombony lehibe ho an’ny firenena iray ny fananany tahirim-bolamena; ho an’i Madagasikara manokana dia sady hamelona ny hambompom-pirenena izany.
← HAPETRAKA NY VOVONANA IARAHA-MIDINIKA HO FANATSARANA NY LALANA MIFEHY NY HARENA AN-KIBON’NY TANY
Extrait du discours de Monsieur Fidiniavo RAVOKATRA, Ministre des Mines et des Ressources Stratégiques lors de la signature de protocole d’accord sur la constitution de réserves nationales d’or entre le MMRS et BFM, ce 23 janvier 2020 au siège de Banky Foiben’i Madagasikara, Antaninarenina →